Sida looga wareejiyo sawiradaada iCloud ilaa Sawirada Google | Androidsis
Thanks Apple, hadda way fududahay u wareeji dhammaan sawirradaada iCloud illaa Sawirrada Google. Adeegga Google ee ku socda sida gallery oo leh Sirdoonka Cilmiga ah oo awood u leh inuu keligiis sawirro ku dhejiyo, waana mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee aan leenahay sida gallery; inkasta oo F-Stop Gallery ay si buuxda nooga tagtay.
Waana run in ilaa hadda aan ku dhex mari karno barnaamijka rasmiga ah ee iOS, ma ahayn wax aad u fudud in laga gudbo dhammaan maktabadda aan ku lahayn iCloud barnaamijka Google. Marka waxaan soo dhaweyneynaa in Apple ay go'aansatay in wareejintan ama socdaalkan ka dhigto mid raaxo leh oo aad ugu fudud adeegii ay soo bandhigtay waana sharxi doonaa.
1 Adeeg gobol ahaan loo heli karo
2 Sida looga wareejiyo dhammaan sawiradaada iyo fiidiyowyadaada Sawirrada iCloud illaa Sawirrada Google
Adeeg gobol ahaan loo heli karo
Waa in lagu xisaabtamo in taageerada Apple laga soo sheegayo tan adeega wali lagama helin wadamada oo dhanhalkii, waxay u dirayaan gobol ahaan. Kuwani waa waddamada la heli karo:
Taasi waxay tiri, Apple lafteeda waxaa lagula talinayaa kadib markaad codsato nuqul wareejinta sawiradaada iyo fiidiyowyada aad ku keydisay Sawirada iCloud, waa inaad tixgelisaa in faylasha aad keydisay midkoodna waayi doonin. Taasi waa, nuqul ayaa la sameeyaa iyada oo aan wax badan laga haynin si aad u haysato dhammaan xusuustaada iyo sawirradaada hadda ku kaydsan Sawirada Google.
Sidoo kale waa in la xusuustaa in adeegga waxay qaadan kartaa 3-7 maalmood inta koobiga oo dhan la sameeyo dhammaan sawirada iyo fiidiyowyada aan ku hayno Sawirada iCloud. Dib u dhaca ku yimid sameynta arintaan waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in Apple ay xaqiijineyso inaad adigu codsatay naftaada, maadaama aan ka hadleyno sawiro xasaasi ah oo ku xiran asturnaantaada isticmaale ahaan ama qof ahaan.
Iyo ugu dambeyntii, qaar ka mid ah Album-yada casriga ah, Sawirro Toos ah ama qaab RAW ah, waxaa laga yaabaa inaan la heli karin markaad u wareejiso adeeg kale.
Sida looga wareejiyo dhammaan sawiradaada iyo fiidiyowyadaada Sawirrada iCloud illaa Sawirrada Google
Afar qodob oo muhiim ah ka hor intaadan u gudbin tan xigta iyo inaad hubiso inaad fulisay
Waxaad isticmaaleysaa Sawirada iCloud si loogu kaydiyo sawirrada iyo fiidiyowyada shirkadda Apple
Aqoonsigaaga Apple wuxuu adeegsadaa sugitaan 2-tallaabo ah
Mid baad leedahay Koontada Google Maxaad ku isticmaashaa Sawirada Google?
Tu Koontada Google waxay leedahay meel bannaan oo ku filan si loo dhameystiro wareejinta
Marka haddii illaa maanta ay ahayd inaad nolol u raadiso qaab waalli ah, markaad soo dejiso sawirrada ka dibna aad geliso, hadda wax waliba way ka fudud yihiin oo ka fudud yihiin:
Ku soo gal ID-kaaga Apple
Hadda xulo "Bedelka nuqul ka mid ah xogtaada"
Raac daaqadaha pop-up aqbalida
Waad arki doontaa taas adeeggu wuxuu ku tusayaa wadarta miiska sawirada iyo fiidiyowyada ku kaydsan koontadaada iCloud
Waxaad sidoo kale ilaalin doontaa cabirka buuxa ee nuqulka aad wareejineyso
Hadda waa inaad sugto oo keliya ogeysiinta adoo ku soo diraya emaylka markii wareejintu dhammaato
Ku weyn qaabab badan sida .jpg, png, .webp, .gif, qaar faylasha RAW ah, .3gp, .mp4, .mkv iyo in ka badan, waa la wareejin karaa.
Kuwa idinka mid ah ee ku cusub Android ee ka socda iPhone, waxaan xuseynaa Sawirada Google, marka laga reebo adeegsiga weyn ee AI ee calaamadeynta iyo kala soocida Dhammaan sawirrada, waxay hadda leedahay adeeg tayo sare oo aan xadidnayn, in kasta oo ay ku dhammaan doonto in la bixiyo wixii ka dambeeya Juun 1 ee sannadkan 2021.
Fursad weyn inaad ka soo wareejiso dhammaan sawirada ka socda iCloud illaa Sawirada Google oo markaa awood u yeelatid inaad kaga raaxeysato barnaamijka sawir-gacmeedka Google ee ku yaal Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida looga helo sawiradaada iCloud ilaa Google Photos iyaga oo jiffy ah
Gujiyeyaasha Bisadaha Gluttony waa wax iska caadi ah oo aanad ka joogsanayn cunista